TubeMogul: Dhijitari Vhidhiyo Ad Kuronga uye Kutenga Pakati PeMigwagwa | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 8, 2016 Douglas Karr
eMarketer akafungidzira avhareji kushambadzira kushandisa bhajeti kuparara ndeye 88% TV, 7% yedhijitari vhidhiyo uye 5% ye mobile video. Iine yechipiri skrini uye nharembozha yekutarisa ichisimuka nekukurumidza, TubeMogul yaona kuti kugonesa nzira yemuchinjikwa-inogona kuwedzera kuzivisa uye kudzikisira mutengo wekushambadzira wega muoni.
Muchokwadi, mune Hotels.com Nyaya Yekudzidza, TubeMogul yakawana kuti message yekuyeuka yaive 190% yakakura kune avo vakaona kushambadza paTV chete uye yaive 209% yakakura pamhepo chete kana ichienzaniswa neavo vasina kuona kushambadza zvachose. Yeuka kwakasimba, zvisinei, yaive yeavo vakaona kushambadza pane ese maviri mascreen. Vataridzi vakaona kushambadzira paTV nepamhepo vaive neyeuko ye 39% kana 255% yakakura kupfuura avo vasina kuona kushambadzira.
Dambudziko, chokwadika, nderekuti mushambadzi angaronga sei pamusoro pezvikwiriso nevhidhiyo yavo kushambadzira. Tubemogul inoshandura kuronga kubva pane zvisingawanzoitika uye zvinonetsa maitiro nechishandiso chine simba kune vatengesi vanogara vachiwana. Kushandisa software kunopa vashambadziri mukana wekugadzira zvirongwa zvakawanda mukati megore uye nekugadzirisa zvirongwa kana mazano achinja. TubeMogul inogonesa vashambadziri kuronga, kutenga, kuyera uye kukwidziridza yavo vhidhiyo kushambadzira pane ese masikirini, kusanganisira:
Dhijitari Vhidhiyo Kushambadzira - mu-rwizi uye mu-banner hesera, akajairwa uye anopindirana pre-roll mafomati ndiwo akajairika kushambadziro yevhidhiyo yevhidhiyo.
Mobile Vhidhiyo Kushambadzira - kushambadzira nhare yekukura vhidhiyo bandwidth.
Yemagariro Midhiya Vhidhiyo Kushambadzira - TubeMogul ndeimwe yekutanga mavhidhiyo ekutenga mapuratifomu kuti asanganise neiyo Facebook API. Iwe unogona ikozvino kusanganisa yako vhidhiyo kushambadza paFacebook ne Instagram padivi neiyo iripo mitsara TV, vhidhiyo yedhijitari, uye kuratidza kushambadzira matanho.
Zvirongwa zveTerevhizheni Kushambadzira - Nekugadzira iyo terevhizheni kushambadzira yekutenga maitiro, yedu Programmatic TV (PTV) mhinduro inobvumidza iwe kutenga maTV kushambadza uchishandisa software, ichikupa iwe mukana weyekuverenga uye vateereri vasingawanikwe kuburikidza nenzira yechinyakare nzira dzekutenga terevhizheni kushambadzira.
TubeMogul inopa premium inventory pamwe nemusika weRTB, vateereri vachinongedzera kuburikidza nehuwandu hwevanhu, hwenzvimbo, hunhu uye hwehukama hwevateereri kunzwisisa, kushambadzira kwekuzivisa, uye zvishandiso zvekufambisa zvekuita nekugadzirisa.
TubeMoguls yakatumidzwa zvakare zita a mutungamiri pakati peVhidhiyo Kushambadzira Kudiwa-Padivi Mapuratifomu muThe Forrester Wave ™. Ivo zvakare vanopa yakazara yekudzidzisa kosi uye setifiketi chirongwa chevashambadziri vezviratidzo kuburikidza TubeMogul Chikoro.
Dhawunirodha TubeMogul's White Pepa paCross-Screen Planning
TubeMogul inowanikwa kune ese maviri mabhenji uye vamiririri.
Tags: digital vhidhiyo kushambadziraforrester wavekushambadzira kwepasirese vhidhiyoyepasi rose vhidhiyo kushambadziramobile vhidhiyo kushambadziraprogrammatic tv kushambadzirapasocial vhidhiyo kushambadzirakushambadzira kweterevhizhenitubemogultv kushambadzavhidhiyo kushambadziraVhidhiyo Kushambadzira Kudiwa-Padivi Mapuratifomu